Nanolotra tamin'ny fomba ofisialy ny Android furor: Android L | Avy amin'ny Linux
Android L: naseho tamin'ny fomba ofisialy ny ho avin'ny Android
Mamerina lahatsoratra iray tena tsara aho navoaka tao amin'ny olona, miaraka amin'ny nuansa manokana manokana mazava ho azy.
Tao anatin'izay 7 na 8 taona lasa izay dia tsy maintsy nianarako fa ny kinovin'ireo rafitra dia tsy ny nomerao ihany, fa koa anarana (codename). Ny tiako holazaina, ohatra, ny kinova Ubuntu dia manana ny isany (Eks. 10.04) sy ny anaranao (Eg Lucid Lynx, biby tandindonin-doza), toa izany koa no nitranga tamin'i Debian (Wheezy, Zurgsns, ny tantaran'ny Toy Story), ary noho izany mamorona distros Linux rehetra aho.
Android Tsy latsa-danja izany, manome anarana mamy na vatomamy isaky ny dikanteny ihany koa. Ireo anarana rehetra ireo dia indraindray mahatonga ahy hanontany tena hoe iza ny ahy, indraindray aza mampiasa lojika na mitady any ho any dikan'ny anarana hanampy ahy hahatakatra kely kokoa ny mitovy aminy. Ny tiana hambara dia izao dia mahazo Google amin'ny "anarana" hafa isika noho ny efa nahazatra antsika.
1 Android L… ny ho avin'ny Android
2 Fifanarahana miloko, velona ary voadio
3 Fampiasa sy azo idirana
4 Android na aiza na aiza
5 Sary tsara kokoa, mampihena ny fanjifana bateria ary ny fiarovana avo kokoa.
6 Google dia mampiseho izay hain'ny Android L
8 Sary hampitahana
9 Faran'ny lahatsoratra
Android L… ny ho avin'ny Android
Google dia nanolotra izay ho ny kinova manaraka Android Tao amin'ny kaonferansa efa fanta-daza ho an'ny mpamorona (Google I / O) Sundar Pichai, filoha lefitry ny Google sady mpanara-maso ny Android, Chrome ary Google Apps, dia niresaka an'io kinova vaovao io miaraka amin'ny anaran'ny Android L, tena endrik'akanjo ho an'ny rafitra fiasa misy ny tsena lehibe indrindra, mankafy mpisera mavitrika iray tapitrisa manerantany amin'izao fotoana izao, hoy i Pichai tenany.
Android L Tsy isalasalana fa ny kintan'ny fihaonana naharitra efa ho adiny telo, ary na dia tsy ny kinova farany an'ny rafi-piasan'ny finday an'i Google aza no aseho, izay antenaina hahatratra ny tsena amin'ny faran'ny taona, dia voalohany indrindra io. fandrosoana manan-danja, manintona ny saina amin'ny fiovana mahery vaika izay notanterahin'izy ireo tao amin'ny Google, miaraka amina interface iray hafa tanteraka sy manaitra tokoa.
Fifanarahana miloko, velona ary voadio
Matias Duarte tompon'andraikitra indray amin'ny famolavolana ny interface interface amin'ny Android, Material Design io no vokatra vao haingana indrindra amin'ny asa izay heverin'ny maro ho tsy lavorary; interface tsara miloko sy mavitrika satria madio sy voalamina. Na ny fiovana sy ny sarimiaina amin'ny efijery iray mankany amin'ny iray hafa aza efa voalamina tsara ao amin'ny Android L.
El miovaova amin'ny Android 4.4 KitKat ho an'ny Android L ankehitriny dia toy izany na dia ny famolavolana ny bokotra mifehy ny interface hita eo ambanin'ny efijery novaina tanteraka, mitazona hatrany io fironana amin'ny fahadiovana sy minimalista io satria manintona.
Ary farany, ny Android L vaovao koa dia manatsara ny rafitra na ny fampandrenesana afovoany, na dia mitondra azy any amin'ny efijery hidin-trano, ary ampifamadiho ny milina virtoaly Dalvik ho an'ny ART vaovao efa nosedraina tamin'ny Android KitKat izany, fa izao dia izy io no mitantana ny rafitra amin'ny alàlan'ny default, manome azy io ho kely kokoa ny fanjifana angovo sy ny mifanentana tanteraka amin'ireo maritrano an'ny 64 potika.
Fampiasa sy azo idirana
Saingy ny Android L dia tsy tsara tarehy fotsiny, ny fiasany dia toa tsara, fihetsika mikasika vaovao, sarimiaina ary fampandrenesana vaovao izay nahazo fitsaboana manokana. Naseho izany Dave burke, Tale Jeneralin-tsarimihetsika Android.
Android na aiza na aiza
Google dia tsy nametra ny tenany haneho izay hoavin'ny Android amin'ny finday avo lenta sy ny takelaka, fa naneho ny hetahetany ihany koa ny hitondra ny sehatra na aiza na aiza, manomboka amin'ny solosaina ka hatramin'ny famantaranandro, mandra-pahatongan'ny fiara.
Android Auto Noraisina ho toy ny fanitarana tonga lafatra ny serivisy sy ny fampiharana Google entina amin'ny fiara. Miaraka amin'ity sehatra vaovao ity, ny finday avo lenta miaraka amin'ny Android L dia hampifanarahina amin'ny fiara ary hanolotra, amin'ny alàlan'ny efijery tontonana, ny fidirana amin'ny Google Maps sy ny rafitry ny fitetezana GPS, mozika amin'ny alàlan'ny Google Play Music, ary na dia ny fahafahana manao antso aza, mandefa hafatra an-tsoratra ary manao fanamarihana amin'ny alàlan'ny Google Keep, amin'ny alàlan'ny feontsika ihany, amin'ny valiny mazava ny iOS amin'ny fiara izay, hoy ny Google, dia efa manana mpanamboatra fiara 40 toa mpiara-miasa amin'ity tetikasa ity.
Android koa dia nentina, amin'ny fomba hafa, amin'ny solosaina finday Chromebook sy Chrome OS, mamela anao hitantana fampandrenesana finday eo amin'ny efijery ary handroso lavitra kokoa, amin'ny alàlan'ny fahafahanao mihazakazaka fampiharana Android amin'ny Chromebook amin'ny fomba natoraly.
Nanolotra ihany koa izy ireo Android TV, izay azo ampiasaina samy avy a Kitapo ambony, na ao a Smart TV avy amin'ny marika sasany izay niara-niasa tamin'ny Internet goavambe handefa fahitalavitra mandeha amin'ity rafitra ity. Android TV dia manana interface interface tena intuitive, ary manolotra fidirana amin'ny programa, sarimihetsika ary lalao amin'ny alàlan'ny streaming na amin'ny fampiharana.
Ny iray amin'ireo fanambarana nanintona ny saina ihany koa dia ny debut ofisialy sy ny fihetsiketsehana nandritra ny Google I / O 2014 an'ny Android Wear, Ny sehatr'i Google ho an'ny smartwatches, ary ireo maodely telo voalohany hahatratra ny tsena amin'ity rafitra ity: LG G Watch, Samsung Gear Live ary ny Motorola Moto 360.
Ireo "famataranandro marani-tsaina" rehetra ireo dia ho toy ny fanitarana ny finday handraisana ary hamaly ny fampandrenesana momba ny hafatra an-tsoratra na tambajotra sosialy, mailaka, hanamarina ny toetr'andro, kalandrie ary koa, hanao an-tsoratra amin'ny alàlan'ny feo.
Sary tsara kokoa, mampihena ny fanjifana bateria ary ny fiarovana avo kokoa.
Kitapo fanitarana Android dia ho tompon'andraikitra amin'ny fanatsarana ny herin'ny sary amin'ny lalao, famoronana geometrika sasantsasany izay hita tamin'ny PC ihany teo aloha. Zava-baovao iray hafa tokony hodinihina ihany koa ny Project Volta, fandraisana andraikitra avy amin'i Google hamarana ny olana amin'ny androm-piainany izay ananantsika amin'izao fotoana izao ao amin'ny finday avo lenta amin'ny alàlan'ny fomba fitehirizana angovo vaovao.
Nisy antsipiriany hafa koa nampiana, toy ny rafitra mamantatra hoe iza ilay olona manandrana mamoha ilay fitaovana, fampandrenesana marani-tsaina izay azo valiana amin'ny efijery mamoha ankoatran'ny Heads up. Nampidirina fomba vaovao hamaha ny terminal koa, satria ho fantatry ny finday raha toa ka manao smartwatch amin'ny Android Wear ianao, manome ny fahafaha-manaingo ny famohana miaraka amin'ny smartwatch hahazoana fiarovana bebe kokoa.
Misy fiasa vaovao koa tonga amin'ny tranokala Chrome, miaraka amin'ny fanatsarana ny safidin'ny sarimiaina sy ny famolavolana pejin-tranonkala finday. Ao amin'ny Google dia te-hahazo mpamorona hanamboatra tranokala haingana sy haingana kokoa izy ireo.
Farany, voalaza fa Android L dia ho azo antoka kokoa amin'ny malware, miaraka amin'ny fanavaozana ny fiarovana isan-kerinandro. Ny rafi-piasana vaovao dia tsy misy afa-tsy ho an'ny mpamorona sy ny Nexus 5 ary ny Nexus 7. Mampiditra API vaovao vaovao mihoatra ny 5.000 izy ary mampanantena fa tena revolisiona eo amin'ny tsenan'ny rafitra fikirakirana finday.
Google dia mampiseho izay hain'ny Android L
fifampiandaniana, dia demo natao miaraka amin'ny 4 tsy tena izy mihazakazaka amin'ny fitaovana misy processeur Nvidia Tegra K1 izay manohana azy indray AEP (Android Extension Pack), ny andiana API vaovao afaka manitatra ny fiasan'ny OpenGL ES 3.1. Ity demo ity dia nampiasain'i Google ho ohatra iray amin'ireo fahaiza-manao sary izay hananana ny Android vaovao.
Vaovao lehibe no miandry ny mpampiasa Android, eny fa na dia ireo tsena vao misondrotra aza, izay miaraka amin'ilay programa vaovao Android One Izy ireo koa dia hahazo maodely finday samihafa amin'ny vidiny tena manintona, maka tahaka ny hetsika tahaka ny an'ny Firefox OS, izay efa mikendry ity tsena ity.
Azonao jerena eto ny Keynote feno:
Ary raha te hampidina azy ianao (1.4Gb eo ho eo) dia azonao atao ny misintona ilay baiko:
Raha izaho manokana dia misarika ny saiko ny Android L, hitako fa tsy mahasarika maso fotsiny fa mampanantena ihany koa ao anaty, hahitako raha manatsara ny fahombiazan'ny rafitra amin'ny fitaovana ambany sy afovoany izany, raha tsy hoe manana intérés 4 na zavatra toa an'io Android io ianao (mazava ny hevitry ny tena) tsy mandeha tsara.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » Android L: naseho tamin'ny fomba ofisialy ny ho avin'ny Android
Ny lahatsoratra dia tsy mandrakotra lalina ny fanoloana an'i Dalvik tamin'ny Art, fa raha ny zavatra novakiako tamin'ny Internet dia nanatsara efa ho 50% ny zava-bita, na dia etsy andaniny aza, ilaina ny fahafaha-mitahiry betsaka kokoa noho ny fomba fanoratanao ny fampiharana na zavatra toa izany.
Inona no azoko lazaina momba ilay faritra hita maso? Tiako izy izany. Sambany aho te hanana Android.
Manantena ny Note 4 aho, saingy manana ny lafy ratsy foana aho fa mijanona amin'ny fanavaozana izy ireo ary tiako ny manandrana izany rehetra izany, mijery ny manodidina dia misy tsaho izay toa namoaka zavatra tena mahaliana avy amin'ny Nexus 6, izay hamboarin'ny motera (avy amin'i lenovo izao), raha marina izany dia handena xD ny vavako
Ny kinova Galaxy S T-Mobile ihany no tadiaviko (ny hany Galaxy izay naharesy lahatra ahy). Ary koa, raha mahavita mitily haingana sy haingana araka izay azo atao i CyanogenMod, dia hiatrika Android kinova tsy miovaova tanteraka isika.
PS: Ireo mpikaroka momba ny fitaovana marani-tsaina mampiasa Blink na Webkit toa an'i Chrome na Opera Blink dia tsy mbola natokana ho an'ny Galaxy Mini, ary na ny Firefox OS aza tsy misy seranana ofisialy ho an'ny findaiko manetry tena.
Nanana ART aho hatramin'ny andro voalohany ary tsy manana olana amin'ny Nexus 4. Na mangataka ny fanovana ireo mpampiasa na tsy ho vita mihitsy izany
Hety ve ny ART ho an'ny Galaxy Mini-ko? Satria miakatra amin'ny taribin'i Davlik aho.
Raha azonao atao ny manamarina ny MIUI v5 rom, dia manana ny fijery tsara indrindra amin'ny fizarana Android amin'izao fotoana izao. Izy io koa dia misy fenitra miaraka amina mpitantana lohahevitra izay ahafahanao misintona ny tsy fahatapahan'izy ireo, ary manome toky anao aho fa tsy misy na inona na inona mahazatra ataon'ny mpampiasa forum rehetra. Mifanohitra amin'izany, ny kalitao sy ny tsiro tsara.
ajam dia fandaniam-bola very maina ny dalvik
Tsy misy afa-tsy ny fanesorana an'i Dalvik izay mahatonga azy ho mendrika. Etsy an-danin'izany, efa nisy olona nitendry ny kitendry ho an'ny Android rehetra nanomboka tamin'ny 4.0 sy ho avy
Google amin'ny finday, Google amin'ny solosaina, Google amin'ny fiara, Google amin'ny fahitalavitra, Google amin'ny fiambenana. Afaka folo taona, Google dia hahafantatra ahy bebe kokoa noho izaho .. 😉
Heveriko fa raha mijaly amin'ny fahaverezan'ny fitadidiako aho indray andro dia tsy maintsy google ny tantarako hitadidiko ..
Amin'ny ankapobeny eny, Google dia na aiza na aiza ary azy ireo ny mombamomba anay: /, tsara ianao dia mila miaina miaraka amin'izany.
Google, Google Na aiza na aiza.
Famolavolana vaovao tsara, ary tsara tokoa ity bilaogy ity
misy mahalala ve hoe rahoviana no ho eo am-pelatanantsika?
4 na iza na iza mpino dia hoy izy:
Heverina fa amin'ny Oktobra 🙂
Valio ny mpino 4ever
Ry tompokolahy Jolla, ESE no ho avin'ny finday avo lenta: Linux kernel 3.4, Qt5, systemd, Btrfs, Wayland, ssh ary root console amin'ny alàlan'ny toerana misy anao, mifanentana amin'ny fampiharana Android sy ny mifanentana amin'ny fampiharana FF OS.
Ny Galaxy S4 ahy dia nanjary azo nampiasaina rehefa afaka namaka azy io aho ary nametraka ROM manokana izay manararaotra ny famahana ny efijery feno (SlimROM), fa Android kosa mbola Android… mamono !!!
Araka ny nolazain'izy ireo tao amin'ny andiany Silicon Valley, tsy ny vokatra farany manavao indrindra no ireo izay mahomby.
Tranga tonga lafatra amin'io fanambarana io dia Apple.
Mikasika ny jolla dia antenaiko fa marina izany, saingy miahiahy aho….
ary momba ny s4 sy ny vokatra samsung rehetra dia zavatra iray ihany no azoko lazaina, maimbo izy ireo!
Tsy azonao omena tsiny amin'ny android izany, ary kely kokoa aza raha toa ka raisintsika ny sosona fanatsarana maharatsy izay ananan'ny vokatra Samsung; Raha tsy mino ahy ianao dia makà NEXUS 5 ary ampitahao amin'ny S4 anao, rehefa vita izany dia lazao amiko raha Android ny rafitra fiasa tsara na tsia, Samsung no safidy ratsy indrindra raha te hankafy ny tena zava-bita ianao. an'ny Android.
Raha ny ahy dia mila miala amin'ny CM 5570 ny Galaxy Mini misy firmware mafy misy ahy GT-S7.2B satria na ho an'ny CM 10.2 aza dia tsy mandeha tsara (Miaraka amin'ny AOSP, tena mitroka satria mandany bateria bebe kokoa ary mandova ireo olana mitovy aminy ihany. toy ny CM ao amin'ny terminal ahy manetry tena).
Rehefa hitako dia mino aho.
Ivan Molina Rebolledo dia hoy izy:
Android dia natao ho an'ny Nexus (And Motorola (Alohan'ny amidy amin'ny Lenovo)) ..
iOS ho an'ny iDevices ..
Windows Phone ho an'ny Microsoft Mobile (Alohan'ny Nokia…) ..
Tizen ho an'ny Samsung ..
Sailfish OS ho an'i Jolla ..
Firefox OS ho an'ny Mozilla Flame? ..
Ny rafitra tsirairay dia miasa tsara miaraka aminao.
Valiny tamin'i Ivan Molina Rebolledo
Tokony hazavaina fa ny Nexus dia LG… .. XD
Mpampiasa LG G2 aho izao, mpampiasa Nexus 5 (nomeko ny reniko izany)
Ary lazaiko aminao fa tsy tena marina ny fanambaranao, maro ny fantsona tena tsara amin'ny android, izay tsy Motorola, na LG, ny olana lehibe indrindra amin'ny android, dia iray ary hatramin'izay, SAMSUNG, hitan'ny olona ity marika ity dia lasa adala izy , izy ireo aza dia mividy azy ireo, nefa tsy mijery ny zava-bitany, raha tsy mino ahy ianao dia makà Xiaomi Red Rice (terminal CHINESE) eo anelanelany, mitovy ny vidiny na kely noho ny motog, ary manana fampisehoana tsara kokoa noho ny GALAXY S4, any ianao no ilaozako XD
Manantena aho fa hamoaka zavatra toa an'i Swift ry zareo.
izaho ve sa manana aingam-panahy kely amin'ny metro / moder-ui ilay interface vaovao?
Ny hany zavatra nahaliana ahy dia ny fanovana ny dalvik ho zavakanto, efa very ny finoako ny android noho ny tsy fahaizany mitantana. Manantena aho fa hamaha izany olana izany indray mandeha izao ny kanto
30% fihenam-bidy amin'ny boky ho an'ny Certificat LPIC